dhiri: samsung galaxy s7 kumucheto, nyowani uye isina kuvhurwa, iri $ 80 kubviswa pane zvakanak kutenga
Kuru Nhau & Ongororo Deal: Samsung Galaxy S7 kumucheto, nyowani uye isina kuvhurwa, iri $ 80 kubviswa paGood Buy
Samsung Galaxy S7 kumucheto 32GB, Yakasvinudzwa, Titanium Sirivheri Best Buy Nyowani $ 419.99 ($ ​​500.00)
16% yabviswa N / A.
Wanga wakamirira iyo chaiyo nguva yekuisa maoko ako pamucheto weSamsung Galaxy S7? Kana mhinduro iri 'hongu', ungangoda kutarisa Best Buy & apos; s yazvino dhizaini yechishandiso.
Iwe unogona parizvino nab 32GB vhezheni yeSamsung & apos; s 2016 mureza mune sirivheri ye $ 420 kana 16% ($ 80) yabviswa uchienzaniswa nemutengo unobvunza vamwe vatengesi vakuru veUS vakaita seAmazon neWalmart. Best Buy iri kutengesa zvisina kuvhurwa zviyero zvakagadzirirwa iyo US, zvinoreva kuti zvinowirirana nezvose zviri zviviri CDMA uye GSM zvinotakura
Zvimwe zvezvinhu zvinonyanya kuzivikanwa pamucheto weGalaxy S7 zvinosanganisira 5.5-inch Super AMOLED Quad HD inoratidzira iyo & apos; dzakakombama pamativi ese, octa-core Snapdragon 820 chipset, 4GB RAM, yakanaka kwazvo 12MP kamera huru, uye 3,600 mAh bhatiri.
Kana iwe & apos; d uchida kuziva zvakawanda nezve iyo S7 kumucheto, ita shuwa yekutarisa yedu yakanyorwa wongororo yefoni . Kana ichi chikumbiro chichikufadza, inzwa wakasununguka kuteedzera iri pamusoro link kune Best Buy.
sei kudzima maforodha pane iphone
Snapchat inounza chinhu chitsva chete kuApple iPhone
Iwe unonyatsoda here smartwatch?
iPhone SE (2020): ndeupi ruvara waunofanira kuwana?